Vao tsy ela akory izay, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivorian'ny indostrian'ny famatsian-drano ao amin'ny tanànan'ny tanànan'i guangxi, fivoriambe fampiroboroboana teknolojia fiarovana ny angovo, notarihin'ny filoha lefitry ny famatsian-drano sy fantsakan-tanàna guangxi ny filoha lefitra mai xinfa, sekretera jeneralin'ny fikambanana zheng jiarong nanao fanovana kabary sy fitehirizana angovo fanetsehana. Nasaina i Shanghai kaiquan handray anjara amin'ny fifanakalozana ara-teknika izay nanamafy ny fahatakarana ny kaiquan tany amin'ny sampana rano.
Wang jian, filoha lefitry ny vondrona kaiquan, dia nanolotra ny toetoetran'ny fampandrosoana sy ny drafitra ary ny drafitry ny kaiquan amin'ny ho avy any amin'ireo orinasan-drano tamin'ny fihaonambe, ary indrindra dia nanamafy ireo serivisy maimaimpoana telo nomen'ny vondrona kaiquan an'ireo orinasan-drano.
1. Manome vahaolana fanavaozana hetra amin'ny orinasa rano maimaimpoana
Tamin'ny alàlan'ny fikarohana sy ny fivoaran'ny paompy nokleary dia nanangona traikefa manan-karena i kaiquan. Tao anatin'ny telo taona lasa, nanatanteraka ny fanavaozana sy ny fampandrosoana paompy ampiasaina amin'ny zavamaniry rano izy io. Izy io dia nahomby tamin'ny famolavolana paompy misy tsindrona roa miaraka amina endrika marobe sy ny sakan'ny faritra avo fahombiazana, ny tahan'ny fikorianan'ny 70% ka hatramin'ny 120%, ny fahombiazan'ny avo ary ny cavitation ambany. Ho fanampin'izany, Kaiquan dia afaka manangona mpanolotsaina manam-pahaizana 20 ao amin'ny vondrona, mpanolotsaina manam-pahaizana momba ny famatsian-drano 260 ary orinasa 600 miara-miasa, ary manome vahaolana fanodinam-bola matihanina ho an'ireo orinasa mpamatsy rano mifototra amin'ny tombony azo avy amin'ny loharanon-karena matanjaka.
2. Aterineto maimaimpoana + efitranon-tsolika fidirana fidirana an-tsokosoko rahona fitantanana rahona
Araka ny fepetra takian'ny minisiteran'ny trano sy ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe any an-tanàn-dehibe dia hampiharina tsikelikely amin'ny alàlan'ny fitantanana mitambatra sy ny fananganana mirindra ny trano pompe faharoa ary sarotra ny fitantanana ny trano paompy. Amin'io lafiny io, kaiquan dia nanolotra fidirana maimaimpoana amin'ny sehatra rahona manan-tsaina, ary ny vokatra mpamokatra hafa dia azo idirana amin'ny alàlan'ny fanavaozana (ny vidiny dia tsy mihoatra ny 3.000 yuan / set).
Kaiquan tsy ho ela dia handefa paompy marani-tsaina sy fitaovana famatsian-drano marani-tsaina, ankoatry ny fanaraha-maso horonantsary nentim-paharazana sy ny fitantanana ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra, ny rafitra dia nanampy ny faritra mifanentana, fampitandremana ny lesoka, ny fitantanana ny fitantanana fiainana feno.
3. Maimaimpoana ny rano amin'ny paompy hanomezana vahaolana momba ny fanavaozana ny paompin-drano faharoa ao an-tanàna
Taorian'ny 20 taona niainany tamin'ny famolavolana, fanamboarana, varotra, fikarakarana ary fikojakojana ny fitaovana famatsian-drano, Kaiquan dia manana fitaovana famatsian-drano isan-karazany toy ny boaty tsy misy tsindry ratsy, karazana tanky tsy misy tsindry ratsy, niova fo feno niomerika niova fo feno, sns., miaraka amina famoahana fitaovana famatsian-drano 5000 isan-taona, ary nandray anjara tamina tetikasa fanavaozana trano paompy an-drenivohitra maro. Eto i kaiquan dia manome fakan-kevitra ara-teknika maimaimpoana amin'ireo sampan-draharaha misahana ny rano mila ny firenena, manao fanadihadiana maimaimpoana momba ny toerana misy ny efitranon'ny paompy mialoha, ary miara-miasa amin'ny sampana rano hamaha ny olana misy sy ny fahasahiranana ao amin'ny efitranon'ny paompy taloha.